Ny Valosoa, 04 Jolay 2017. Mahamasina, Fitondrana HVM, Vahoaka mahantra, Ny herim-boatay… | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Mahamasina, 08 Jolay 2017. Marc Ravalomanana.
Faravohitra, 04 Jolay 2017. Marc Ravalomanana : « Vonona amin’ny fitandroana ny filaminana ny TIM ». →
Matahotra vavaka sy rindra-kira ary Zumba ny fitondrana
Tsy hihemotra ny hetsika etsy Mahamasina ny 8 jolay izao
Nanao valandresaka tamin’ny mpanao gazety ny prefektoran’ny polisy eto Antananarivo Renivohitra fa ho foanana indray hono ny hetsika ataon’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), hankalazàna ny faha-15 taona ny TIM ao amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny sabotsy 8 jolay ho avy izao izay efa nahazoana fahazoandalàna ara-dalàna tany amin’ity farany . Lazaina fa resaka tsy fandriampahalemana no antony hanafoanana ny lanonana , dia tena izay tokoa ve no marina ? hita indray fa tahotra an-dRavalomanana Marc hahazo vahoaka be amin’io andro io dia mieritreritra ny HVM fa hitondra henatra ho azy izany. Tsy efa hatrany am-boalohany ve dia nandà avy hatrany ny mpitondra raha vao nametraka ny taratasy fangatahana hanao hetsika fankalazàna ny TIM fa nomeny alalana ara-dalàna , andro maromaro aty aoriana dia miresaka amin’ny mpanao gazety fa ho foanana indray ? tsy misy dikany amin’ny fitondràna izany ny vola efa lany sy ny fahasahiranana mahazo amin’ny fikarakaràna zavatra lehibe toy izany ?
Tadidio fa ny fanafoananareo mpitondra io fankalazàna ny faha-15 taona ny antoko TIM io no vao mainka hampangidy hoditra anareo eo imason’ny vahoaka Malagasy sy izao tontolo izao fa fitondràna saro-tahotra sy mangozohozo no misy eto . Na izany aza no zavamisy dia nanambara ny depiote Felix Randriamandimbisoa filohan’ny vondrona parlemanta TIM fa tsy mihemotra amin’ny fankalazàna ny tsingerintaona nahaterahany hatao eo amin’ny kianjan’i Mahamasina ny sabotsy 8 jolay izao ny antoko Tiako i Madagasikara satria efa nahazo alalana ara-dalàna avy tany amin’ny mpitondra fanjakàna izy ireo , mitohy avokoa ny fandaminana efa ataon’ny kaomisiona tsirairay avy .
Maninona ny HVM no nahazo nankalaza ny tsingerintaona faha- 3 nahaterahany tamin’ny volana jona , nefa tamin’izany noraràna ny fanaovana hetsika politika satria ao anatin’ny fetim-pirenena ? Antoko matanjaka indrindra eto Madagasikara ny HVM hoy ny minisitra Rivo Rakotovao , ka inona no hatahorana ny TIM ? Aza mampihomehy ry mpitondra à ! matoa ny olona manao fety dia efa miomana fatratra izy izay amin’ny resaka fitandroana ny tsy fandriampahalemana , ka aza izany no analàna vonkina . Ka inona koa ny olana moa raha manampy amin’ny fitandroana ny filaminana amin’io hetsika nahazoana lalana ara-dalàna io ny tandroka aron’ny vozona e ! tsy adidin’izy ireo ve no manampy ny mpikarakara amin’izany satria vahoaka Malagasy ireo ka tokony harovana ny ainy sy ny fananany.
Vavaka iraisam-pinoana, rindra-kira hataon’ny mpanakanto samuhafa, Zumba, sy hetsika maro samy hafa,… no hatao mandritra io sabotsy ho avy izao io, ka ny dikany dia matahotra vavaka sy rindra-kira ary Zumba izany ny fitondrana HVM sy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina !
Iharan’ny sondro-bidin’ny fitondrana HVM ny vahoaka
Efa fotoana ela izay no nidangana ny vidim-piainana teto amin’ny firenena. Niaka-bidy ambony avokoa ireo entana fanjifan’ny vahoaka andavanandro. Tsy mbola nisy vidim-bary nidangana be raha tsy tamin’izao fitondrana Rajaonarimampianina izao. Tafasondrotra hatrany amin’ny 2200 ariary mahery ny vidim-bary vao nikoropaka ny fitondrana, efa tara loatra. Mafy ny fidonan’izany any amin’ny isam-pianakaviana sy ao am-bilaniny. Tsy nisy fialan-tsiny nataon’ny mpitondra tamin’ny vahoaka tao anatin’izany. Niaka-bidy ambony dia ambony ny arina fampiasa an-tokantrano na ny saribao. Nifohifohy volo tanteraka ny fianakaviana Malagasy niatrika izany satria ny any amin’ny ain-dehibe amin’ny fivelomana no voadona. Tsy maintsy manjifa izay vidiny apetraky ny mpivarotra na ohatrinona na ohatrinona satria tsy maintsy mahandro.
Niharan’ny sondro-bidy avokoa ny vahoaka tamin’ny safidiny ho amin’izany. Tsy nanam-bahaolana ny fitondrana fa “nilalao tanana” fotsiny tao anatin’izany. Tsy misy izay tsy misondrotra ankehitriny ny vidin-javatra ilaina andavanandro. Sempotra amin’ny sondro-bidim-piainana ny Malagasy ary valalanina sy very fanahy toy ny valala voatango satria tsy voafehin’ny mpitondra azy ny lafiny ara-tsosialy iainany. Manampy trotraka ny tsy fandriampahalemana izay mampitaintain-dava ny vahoaka andro aman’alina. Tsy natao ho an’ny vahoaka ny mialokaloka ao anaty “fitaratra” tsy laitram-bala mba hilaminan’ny fiainany…
Eo ihany koa anefa ny lafiny toe-karena izay zary “mibanaka”, hoy ny fitenin’ny tanora, ho an’ny vahiny. Misy antony matoa mitodika aty Madagasikara avokoa ny “mpanao bizina” eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy noho ny fanentanana na ezaka nataon’ny fitondrana velively, fa noho ny tsy fahafehezana ny harem-pirenena mihitsy. Tsy horodorodo hankaty ny sinoa, ohatra, fa ao raha; ny karana sy ny frantsay efa tsy lazaina intsony ny fihetsiny eto. Ary miharihary no sady porofo mitohoka amin’ny tendany amin’izany ny amin’ireo Nosy manodidina na “îles éparses” an’ny Malagasy izay bodoin’ny mpitondra frantsay fotsiny izao. Tsy midika inona velively ary karazana fandrebirebena vahoaka fotsiny ihany ny filazana, fa nanao dinika tamin’ny filoha frantsay momba izany Rajaonarimampianina. Tsy voafehin’ny fitondrana Hvm ny lafiny toe-karena…
Tsy atao ho mahagaga velively raha mipoitra etsy sy eroa ny fitakina sy fitokonana samihafa isaky ny mihetsika. Ny farany mafana izao, dia ny hetsiky ny sendikan’ny mpiasan’ny ladoany, izay efa hanaovan’ny fitondrana ramatahora toy ny fanaony. Manomboka mivondrona anefa ny sendikà maromaro ankehitriny ary andrasana izay hiafaràn’ny fizotran’ny raharaha. Ho voafehiny toy izay efa lasa izay ve?
Ho an’ny mpanara-baovao, ny vahoaka izay mikasa hanao hetsika hatrany aloha no hita ho voafehin’ny fitondrana hatramin’izao. Izay mikasa hihetsika mantsy; dia miàla any amin’ny “angady harona” koa ny fitondrana amin’ny alalan’ny fampiasana miaramila, zandary, polisy. Niaraha-nahita, fa tsy niahotra mihitsy ireo “fitaovan’ny fitondrana” ireo mandrahona izay mitady hitroatra fa tsy mahatanty ny zava-misy iainany. Ilay vahoaka rahateo efa “malemy” ihany amin’ny fiatrehana ny fahantrana sy fahasahiranana lalina manjo azy isan’andro… Io manjo azy io ihany koa no araraotin’ny mpitondra lalaovina isan’andro ihazonana fitondrana sy mbola kasaina hijanonana eo amin’izany toerana izany
Sprinter miisa 3 no ho avy eny Mahamasina ny 8 jolay izao
Nisy ny Fivoriamben’ny DISTIM Mahajanga 1 teo ambany fitarihan’ny Filoha Andriamatoa Yvon, izay natao ny faran’ny herinandro teo, tao amin’ny lycée FJKM Mangarivotra. Ny fandaharam-potoana tamin’izany dia fanolorana amin’ny fomba ofisialy ny mambra vaovao ny DISTIM Mahajanga1. Fanentanana sy famelabelarana ny programan’asa izay ho tanterahin’ny DISTIM miaraka amin’ny FOKTIM amin’ny fokontany 26. Fanomanana ny famonjena ny faha-15 taonan’ny TIAKO i MADAGASIKARA (TIM) any Antananarivo.
Nanolotra « sprinter 3 » maimaimpoana ny Filohan’ny DISTIM Andriamatoa Yvon, hitondra ireo solontena avy any Mahajanga hiatrika ny faha-15 taonan’ny TIM etsy Mahamasina ny sabotsy izao. Nandray anjara daholo ihany koa ny mambra DISTIM rehetra ho fanampiana amin’izay mety ho lany rehetra. Nisy ihany koa tsara sitrapo iray dia i Ramatoa Volana izay vadin’Andriamatoa Naivo RAMEFY ben’ny tanànan’ny TIM Mahajanga1 teo aloha, fa hiantoka ny ampahatelon’ny saran-dalan’ny fiara iray ary isaorana ihany koa ireo nanolo-tanana rehetra hoy ny filohany.
Fisaorana mitafotafo no nasetrin’ny filohany, ireo mpikambana TIM tonga maro be avy amin’ireo Fokontany 26. Nampanantena izy ireo fa tsy ho latsa-danja miohatra amin’ireo DISTIM manerana an’i Madagasikara i Mahajanga, ka ho tonga maro be hanotrona izy ireo amin’ny fankalazana ny faha- 15 taonan’ny TIAKO i MADAGASIKARA (TIM) izay hatao ao amin’ny Kianjaben’i Mahamasina ny sabotsy izao.
Tsy mahagaga raha mahantra hatrany noho ny toetsain’ny sasany
Nahoraka tamin’ny tambazotran-tserasera ny resaka an-telefaonina nifanaovan’ny mpandraharaha goavana Claudine Razaimamonjy mpanolotsaina manokan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina voarohirohy tamin’ny resaka kolikoly sy ny BIANCO raha niantso azy ity farany tany am-boalohany, mialohan’ny nisamborana azy teny Mahamasina iny . Gaga ny rehetra fa vava tsy vava no nataon’i Claudine Razaimamonjy tamin’ny resaka nifanaovana , ary tena nampihaiky volana mihintsy ny teny maloto tsy fampiseho masoandro nataon’ity olomalaza ity tao anatin’izany . Izany ve no ataon’ny namana akaiky ny mpitondra ka aiza moa i Madagasikara no tsy hilatsaka ao anaty lavaka hatrany sy ho tototry ny fahantràna? izany no ambetin- dresaka mandeha etsy sy eroa . Izay angamba no nahatonga ny filoha Hery Rajaonarimampianina hiala pà amin’ny fitenin’ny tanora indray teo imason’ny mpanao gazety vahiny tany Frantsa fa afaka miteny hoe mpanolotsaina azy sy mahafantatra azy daholo hono n’aiza n’aiza , i Claudine Razaimamonjy no tiany ho ambara eto satria araka ny fahafantaran’ny maro azy dia olona akaiky sy mpanolotsaina manokan’ny filohampirenena ity mpandraharaha goavana voarohirohy ity .
Sary CLAUDINE: Modian’ny filoha Hery R. fanina i Tatie Clô rehefa voa.
Hagegen’ny mpitondra ny fidirana tanaty fitaratra ny 26 jona teo
Mbola miakasika ny fankalazana ny fetim-pirenena ihany no mbola hitondran’i Pr Harimalala Joseph ny fanehoan-keviny amin’ity anio ity. Miainga amin’ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny bokin’i Ezekiela 32: 2-4 no iaingan’ny fanehoan-keviny, izay manao hoe: “Ry zanak’olona, manaova hira fahalelovana ny amin’i Farao, mpanjakan’i Egypta, ka ataovy aminy hoe: Nanao ny tenanao ho tahaka ny liona tanora tamin’ny firenena ianao. Kanjo tahaka ny dragona ao anatin’ny ranobe; ary nitsoriaka teny amin’ny oninao ianao dia nanakobakobana ny rano tamin’ny tongotrao ka nahaloto ny Ony. Izao no lazain’i Jehovah tompo: ny firenena betsaka tafatambatra no ho entiko mamelatra ny haratoko aminao, ary hakarin’ireny amin’ny haratoko ianao, dia hatsipiko eny an-tanety ary hariko any an-tsaha, dia hampitangoronoko eo aminao ny voro-manidina rehetra, ary homeko hivokisan’ny bibidia rehetra ny tenanao”.
Efa nambarako teto ity tenin’Andriamanitra ity ho an’ny mpitondra fanjakana saingy iniako averina izany satria tanteraka teo amin’ny kianjaben’ny Mahamasina izy io, satria dia iny fitaratra namonosana anareo mianakavy iny Andriamatoa filoha ilay harato ambaran’ny soratra masina satria dia nampametra-panontaniana ny maro ny nataonareo, izay niavaka teto ambon’ny tany, kanefa dia filoham-pirenena aty amin’ny tany mahantra indrindra. Raha misy filoham-pirenena atao hoe halàn’ny olona aza izao dia ny filoha amerikanina kanefa tsy mbola nisitri-belona tanaty fitaratra toa iny izy, fa ny anareo dia efa hagegena tanteraka tokoa. Raha tsy fandriampahalemana no hitondrana fanazavana azy dia tsy ampahafirin’ny mitranga any amin’ny tany misy mpampihorohoro ny eto amin-tsika, ka raha bangoina dia efa tsy fahatokisanareo ny vahoaka Malagasy tanteraka ireny fihetsika ireny ary na hianareo ihany aza dia mahatsapa fa halan’ny olona ianareo matoa manao ireny fihetsika ireny.
Ankoatra izany dia mibaribary ny tsy fahatokisanareo an’Andriamanitra dia naleonareo nanalabaraka vatana tao anaty fitaratra, izay ho harato ho anareo tokoa moa izany. Ny tsara ho fantatrao nefa Andriamatoa filoha dia tsy ho afaka hiantehitra amin’ny herin’ny tenanao ianao satria tsy aharo anao velively izany raha tsy homban’ny fiarovan’Andriamanitra, fa hoy ny ambaran’ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Mpitoriteny 8:8 manao hoe: “Tsy misy olona manan-kery hahatana ny ainy, na manan-kery amin’ny andro hahafatesana, ary tsy misy fahafahana amin’ny ady, ary ny ratsy fanahy tsy ho voavonjin’ny faharatsiany”. Ety ampamaranana dia nisy ny teny naloaky ny vavanao Andriamatoa filoha milaza fa hisokatra amin’ny vazan-tany 4 i Madagasikara!
Moa ve tompoko ny fizarazarana an’i Madagasikara ho an’ny firenena maro no tianao ambara sa inona? Sao ny mifanohitra amin’izany mantsy ka dia hahita loza amin’Andriamanitra amin’izany ianao, nohon’ny fitiavan-tena diso tafahoatra loatra, ny fitiavam-bola sy voninahitra ataonareo sy ny mpomba anao ankehitriny ireo. Hoy mantsy ny tenin’ny tompo manao hoe: “Ary ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny Izy, ary hangonin’ireo ny olom-boafidy avy amin’ny vazan-tany 4, hatramin’ny fara vodilanitra rehetra”, araka ny matio 24:31 io, Izany hoe raha haneno ny trompetra farany moa ve mbola hiankohoka amin’ny fitiavam-bola sy ny fitiavam-boninahitra ianareo mpitondra izay tsy mitsinjo ny madinika amin’izao fotoana izao io? Aoka mba ho ampy izay ny andron’ny tsy fahalalana Andriamatoa filoha sy ny mpiara-miasa aminy fa sao adinina aminareo ny manodidina ireo mahantra sy madinika ireo any aoriana any.
Pôlitika: fitaovana entin’ny mpitondra handemen-tsaina sy hanaovana tsindry
Raha ny famaritana ny « pôlitika » dia fahaizana mitantanana tanàna eo amin’ny lafiny rehetra. Nisy teo amin’ny tantaran’ny firenena sasany eto ambonin’ny tany dia saika ben’ny tanànan’ny renivohitra ao aminy no nirotsaka kandidà ho filoham-pirenena dia any. Ny teto Madagasikara manokana no jerena dia Ravalomanana Marc no santionany amin’izany. Ny lehiben’ny fivondronana Antananarivo Renivohitra Razanamasy Guy Willy, nitovy lenta amin’ny Ben’ny tanàna, no lasa filoham-panjakana tamin’ny taona 1996. Tany Frantsa koa dial any ho filohan’ny Repoblika frantsay ny ben’ny tanàna Jacques Chirac.
Marina fa ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra ihany koa Rajoelina Andry Nirina, 1997-1999, saingy fanonganam-panjakana no nandraisany ny fahefana naha filohan’ny tetezamita azy. Raha noho ny tsy nahafahan-dRavalomanana Marc nitondra ny Firenena, ara-pahasalamana na antony hafa, no nanery azy niala ary tsy afaka nitondra ihany koa ny filohan’ny Antenimieran-doholona dia azo neritreretina ihany, angamba, ny nanendrena an-dRajoelina Andry ho filoham-panjakana nanaraka ny pitsopitsony nanaovana izany tamin-dRazanamasy Guy Willy. Sady tsy filoham-pirenena izany Rajoelina Andry no tsy filoham-panjakana ka sady tsy ara-dalàna no tsy ara-drariny. Matoa iretsy filoham-pirenena roa voalaza esty ambony lany tamin’izany toerana izany dia noho ny nahatsapan’ny vahoaka fa nanana ny politika fahaizana nitantana sy nampandroso ny renivohitra izany izy ireo.
Amin’izao fotoana izao eto Madagasikara dia azo lazaina fa azo isaina amin’ny rantsan-tanana ireo politisiana manana ny fahaiza-mitantana izany kanefa lany ho amin’ny toeran’ny loholona na depiote na ben’ny tanàna. Ny toe-javatra aterak’izany dia tsapa fa vitsy ireo olomboafidy ireo no manana ny fahaizana mampandroso eo amin’ny lafiny rehetra ny distrika na kaominina nahalany azy ka lasa toerana ampiasaina ho famoretana sy hanamparam-pahefana ary fitadiavana tombotsoa mihompapana izany. Porofon’izany, raha tena mikatsaka ny tombotsoam-bahoaka sy fampandrosoana ny faripifidianana nisy azy ary matoky ny fahaiza-manaony dia tsy hivadibadika sy hitsampintsampy amin’ny antoko politikan’ny fitondrana izy ireny. Ny politikan’ny politisiana gasy mantsy dia ny fampiasana ny anaran’izay mitondra mba entiny handemena ny sain’ny vahoaka ambonin’ny fanaovana tsindry (traffic d’influence). Etsy an-daniny koa ho fiarovana ny mpitondrana dia ampiasaina ny voambolana “ray amandreny” entina milaza fa na mety na tsy mety ny ataony dia tsy maintsy arahina. Tsy misy afaka fa rafitra mpanao lalàna ny Antenimiera roa tonta kanefa alohan’izany dia fahefany ihany koa ny manolotra volavolan-dalàna entina mampandroso ny Firenena iray manontolo sy mampivoatra ny fiainam-bahoaka ary zony feno ny manontany ny rafitra mpanatanteraka izay antony tsy nahatontosany ny andraikitra mifanandrify amin’izany.
Izay no anto-pisian’ny fitsipaham-pitokisana ny goverenemanta rehefa tsy manana ny fahaiza-mitantana. Fantatry ny mpitondra ny olana mianjady amin’ny Firenena sy ny vahoaka Malagasy, tsy avy amin’ny alalan’ny famoahan’ireo fikambanana iraisam-pirenena tatitra ihany, fa avy amin’ny fitarainana mivantana avy amin’ny vahoaka ihany koa. Tsy ilàna fanontaniana etsy sy eroa izany satria anjaran’ny mpitondra ny mikaroka ny vahaolanamifanaraka amin’ny olana, isaky ny departemanta voakasika, raha manana ilay fahaiza-mitantana na “ilay politika” izy. Tsy mbola ahitan’ny mpitondra fanafody hatramin’izao ny resaka tsy fandriampahalemana na an-drenivohitra na any ambanivohitra.
Ny mahagaga sy mahalasa saina anefa dia hain’ny mpitandro ny filaminana tsara ny mampiasa singa (elements) amina arivony sy fitaovana raitra rehefa miaro ny mpitondra amin’ny vanim-potoana mandalo iray (événement ponctuel). Hain’ny olomboafidim-bahoaka tsara ny mitaky ny tombotsoan’ny tenany ary tonga mameno trano izy ireo, amin’ny alàlan’ny fandaniana lalàna mifandraika amin’izany. Saingy tsy mihoatry ny ratsan-tànana sy tongotra izy ireo rehefa mandany lalàna ho amin’ny tombotsoan’ny besisnimaro. Tsy “politika” araka ny famaritana azy izany no ataon’ny olomboafidy sy politisiana gasy fa “fikafika” entina mampandry andrisa sy mandemy ny sain’ny mpiray firenena eo ambany fahefany fotsiny.
Sabotsy Namehana-Manandriana Avaradrano
Tsy raharahian’ny filoha Hery R . ny faharatsian’ny lalana
Mampiteny ny moana ny haratsin’ny lalana miainga eo Sabotsy Namehana mandalo an’i Tsarafara sy Ambatofotsy Avaratra hatrany Manandriana Avaradrano . Kaominina 2 no andalovan’izany lalana izany saingy tsy zakan’ny vola eo am-pelatananan’izy ireo ny fanaovana azy. Tsorina fa tsy vitan’ny Kaominina eo an-toerana ilay izy saingy tokony mba ho raisin’ny fanjakana izany lalana izany sady ny Filoham-pirenena rahateo mahafantratra tsara an’i Sabotsy Namehana . Tsy misy ny fanarenana hatreto izay heverin’ny maro fa tsy firaharahiana tsotra izao. Ratsy rahateo ny vokatra azon’ny Hvm tamin’ny fifidianana Ben’ ny tanàna sy Filohampirenena farany teo. Mimenomenona ny olona ; ary tsara ho marihana fa nandritra ny taona nitondran’ny Filoha Marc Ravalomanana no nahavitan’izany lalana izany ho tsara tarehy . Tsy nisy ny fikarakarakana ka izao iaraha-mahita izao ny vokany. Araka ny feo etsy sy eroa dia mandritra ny Propagandy amin’ny taona ho avy no itokanana ny zava-bitany saingy azo antoka fa tsy hambabo ny fon’ny olona intsony izay fihetsika ho ataon’ny fitondrana amin’izany, sa ahoana hoy ianao ?
Tsy maintsy alàna ihany i Solo
Raha `zao zava-misy izao ,
Fa efa matroka daholo
Nanao izay ho afany Rajao,
Kanefa antomotra ny antambo.
Tsy maintsy ho rendrika ny sambo.
Ireo akama manodidina,
Be dia be no miala bala.
Efa manahy ny hitsingidina
Ka indreo mihoalahoala.
Miaraka amin`ny filohany.
Mody mampiseho ny tsarany
Mialoha ny hidabohany.
… Mbola hihodina ny tany.
(be ny zava-misiteriny)
Saingy misy fiafaràny
Ny voantay maneho ny heriny.
DADAN`i ZINA (03-07-17)
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Claudine Razaimamonjy, Hery Rajaonarimampianina, Mahamasina, Marc Ravalomanana, Tim 15 ans. Ajoutez ce permalien à vos favoris.